Midowga Yurub oo kordhinaya taageerada dhaqaale ee ay siiyaan ciidamada AMISOM
Ururka Midowga Yurub ayaa sheegay iney Midowga Afrika siinayaan lacag dhan 82 Milyan oo Euro oo lagu taageerayo ciidamada AMISOM ee ka howlagala dalka Soomaaliya.
Madaxa arimaha siyaasada dibada ee Midowga Yurub, Kathrene Ashton ayaa xaqiijisay in Midowga Yurub uu markale ugu deeqayo ururka Midowga Africa lacag dhan 82 Million oo Euro ee lacagata Midowga Yurub ah si loo sii xoojiyo awooda ciidamada Midowga Africa ee kusugan dalka Somaliya.
Katherine Ashton oo ka hadashay doorashadii madaxda dowladda Soomaaliya iyo magacaabista R/wasaaraha cusub ayaa tilmaantay in arrintaasi Soomaaliya u tahay bog cusub oo u bilowday kadiba sanado badan oo ay kusoo jirtay colaado iyo is-qabqabsi.
Midowga Yurub iyo USA ayaa bixiya taageerada maaliyadeed iyo tan qalab ee ciidamada AMISOM eek u sugan dalka Soomaaliya.
Ciidamada AMISOM ee ka howlgala dalka Soomaaliya oo tiradoodu ku dhowdahay labaatan kun oo askari ayaa haatan waxa ay wadaan inay isku fidiyaan gobolada dalka iyagoo doonaya in ay furaan wadooyinka waaweyn ee mara gudaha dalka.